3 xal for "ma tirtiri karaa files" qalad ah
In dhibaatada "ma tirtiri kartaa file" dhacdaa sababo 1.Possible
2.Solutions ay u xaliyaan dhibaatada "ma tirtiri kartaa file" ka
Waa arrin aad looga xumaado in ay arkaan fariin la "file aan la tirtiri karaa" marka aad isku daydo in laga takhaluso files ee aanad u baahnayn mar dambe. Xaaladaha qaarkood, waxaa jira xaalado fudud si looga fogaado noocan oo kale ah fariimaha ama siyaabo lagu maamulo fudud xaaladda. Laakiin waxaa kale oo jira xaalado ay arday ma xamili karaan Kabcada_ faylasha gaar ah. Haddii tani ay tahay kiiska, xalka ugu wanaagsan uu yahay in ay la hadlaan khabiir Windows a yaa og yahay waxa NTFS tusaale ahaan.
Si kastaba ha ahaatee qodobkan waxaa lagu muujiyey xaqiiqooyin fudud si looga fogaado ama taxaddar at. Falalka waxaa loogu tala galay in la siiyo Hanuun arday iyo khubaro iyo sidoo.
Qaybta 1aad sababo macquul ah in dhibaatada "ma tirtiri kartaa file" dhacdaa
File 1. in aad doonaysid in aad tirtirto waa in la isticmaalo
File ee la isticmaalo ayaa laga yaabaa inuu si dhab ah u furan meel ama waxay noqon kartaa in xaaladda tirtirka la sugayo. Si aad u aragto oo dhan files iyo geedi socodka socda, Manager furan Start Task oo ku dhow waxaa ka faylasha adigoo gujinaya End Task.
2.Access in faylka la diido
Haddii aad la dhibtoonayo ah musuqmaasuqa nidaamka file, taas looga hortago in ay helaan faylka. In aad inta badan xaaladaha ma awoodaan in ay tirtirto file haddii nidaamka faylka kharribmay oo xal u noqon kartaa in uu ordo utility Windows ah si ay u xaliyaan dhibaatadan.
Magaca faylka 3.Beerta waxaa ka mid ah magac aan waxba ka jirin, oo ay ku jiraan meesha bannaan ee magaca
Haddii aad raadiso file la odhan jiray "text.txt" oo ma waxaad ka helaysaan, malaha waa kiiska in aad loo isticmaalo meel ka hor hadalka tbat. Sidaas darteed, haddii aad file waxaa la odhan jiray "text.txt", waa in aad si ay u isticmaalaan magaca faylka sida saxda ah.
4. Magacaaga file ka mid ah magac ku hayaa Win32
Waxaa jira faylasha gaar ah la magacyada loo hayaa kaliya ee nidaamka ka hawlgala Windows. Si magaca noocan oo kale ah files, waxaad isticmaali kartaa barnaamijka non-Win32.
Part 2 Solutions si ay u xaliyaan dhibaatada "ma tirtiri kartaa file"
Waxaad qaadan kartaa eegno bar ah kula files furan, halkaas oo sida caadiga ah aad ka arki kartaa dhammaan faylasha ee aad isticmaalaysid la joogo in. Xir file ah oo isku day in aad tirtirto. Haddii aad weli arrimaha, ay u badan tahay sababtoo ah file in wali waa in la isticmaalo, la furo Manager Task ah. Si ay u arkaan dhammaan faylasha aad furan iyo geedi socodka, Manager furan Start Task adigoo riixaya in waqti isku mid ah [Ctrl] + [Alt] + [Del] furayaasha.
Waa fursad u fudud in ay xirto file ah oo aan ka jawaabaya. Ka dib marka aad u aragto liiska la files iyo geedi socodka, dooro file aad rabto in la xiro oo guji "hawl End".
Bedelayaan faylasha aad ku keeni karo dhibaatooyin ka, waa mid ka mid ikhtiyaar u ah xallinta tirtirka ee files kuwa. Waa in ay isticmaalaan barnaamij aan Win32 ah, sida qalab POSIX isticmaala Saan ku haboon gudaha u files kuwa ka. Malaha tallaabooyinka kuwan waxaa loogu tala galay khubaro.
Haddii file a kharribeen galay habka waxaa ka hortagga helaan faylka, waa in aad u utility Chkdsk ku saabsan mugga disk ah in la saxo qaladaad kasta ka dib markii jeegga oo ka mid ah qaybaha xun.
Part 3 Talo & Tricks
Solutions 1 iyo 3 ay sahlan tahay in la sameeyo iyo ma u baahan tahay si aad u khabiir Windows si falalkan. Malaha aad u isticmaashay hor Manager Task Start ah u arkaysid wax-qabadka habka. Sidaas oo kale, waxaad ka arki kartaa oo ku dhamaan hawl in aadan rabin in mar dambe ay maamulaan. Utility Check Disk waxaa si fiican u yaqaan (ama waa in) dadka isticmaala Windows. Waxaa lagu talinayaa in uu ordo jeegga ah ee aad si joogto ah nidaamka; kiis kasta markii qaar ka mid ah dhibaatooyin ka dhacaan. Habka labaad u bedelayaan faylasha ay u baahan tahay heerka gaar ah oo aqoon berrinkii Aqbaarta.
> Resource > masixi > 3 xal loogu baadi ma tirtiri karaa files